Metadata.io: Ataovy mandeha ho azy ny fantsom-pifaneraseranao ho an'ny ABM | Martech Zone
Metadata dia sehatra fangatahana mizaka tena izay manatsara ny fandanianao doka ara-tsosialy sy nomerika hanampiana anao hamorona haingana ny fangatahana kalitao sy fantsom-pivoarana avy amin'ireo kaonty kendrenao.
Ny sehatry ny fianaran'izy ireo AI sy ny milina dia mamakafaka ny angona CRM manan-tantara hahafantarana hoe iza no tokony hahita ny dokao, avy eo ny motera fanandramana marobe dia manandrana fiovana an-jatony ary manatsara izay manome ny valiny tsara indrindra. Ny valiny dia fantsom-pahalalana tsara avy amin'ny kaonty kendrena novokarina haingana.
Metadata.io Platform Demo sy topy maso
Fantaro ary kendrena - Jereo ny toerana mamy amin'ny marketing. Manangana mpihaino amin'ny fampiasana ny teknolojia, ny hetahetan'ny mpividy, ny firaketana an-tsary, ny automatisation marketing ary ny loharanom-baovao CRM. Fahazoana mombamomba ny fifandraisana 1.2 miliara
Fandraisana anjara sy fanandramana - Manandrama ary mianara amin'ny ambaratonga. Ny Metadata's AI dia miteraka fitsapana an-jatony, ka tsy mila izany ianao! Tadiavo ny fitambarana kreatiora, mpihaino ary ny valiny mahomby indrindra mahasarika ny kaontinao.
Mahazoa sy mamadika - Fantaro ny fangatahana, manatsara ny fidiram-bola ary avereno. Fampisehoana, tatitra momba ny fanondroana mifototra amin'ny fantsom-pamokarana namboarina, ny firotsahan'ny kaonty, ny fantsona misy eo aminy ary ny maro hafa.
Ny sehatra Metadata dia manatsara ny fitarika ho azy alohan'ny handrindrana azy ireo amin'ny Marketing Automation na CRM Platform anao, vokatr'izany dia misy ny làlam-piovan'ny fiovam-po voatsonga miaraka amin'ny angona avo lenta.
Leadsift sy fampidirana Metadata
Ny fironana miasa any an-trano tato ho ato dia niteraka fanamby mahaliana ho an'ireo Mpivarotra nomerika izay miankina amin'ny teknolojia fanaovana sarintany ny adiresy IP avy amin'ireo mpitsidika tsy fantatra anarana amin'ny orinasan'izy ireo, fa ny adiresy IP an-trano dia tsy mitanila ny mombamomba ny orinasan-dry zareo. Manasarotra ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitra amin'ny ABM, izay laharam-pahamehana ho an'ny B2B Marketers.
LeadSift dia nanambara fiaraha-miasa stratejika amin'ny MetaData.io hanampiana ireo B2B Marketers hanao fanentanana dizitaly nefa tsy miankina amin'ny IP Matching.
Amin'ny fampiasana famantarana famantarana avy amin'ny LeadSift, ny mpanjifa Metadata izao dia afaka mikendry lasibatra ny mpividy amin'ny lisitry ny kaonty kendreny amin'ny alàlan'ny fampiasana famantarana toy ny adiresy mailaka, izay fomba iray mahomby kokoa hahatratrarana ireo matihanina B2B rehefa miasa matetika any an-trano izy ireo.
Miaraka amin'ny famantarana an-tranonkalan'ny LeadSift - azon'ny mpivarotra atao laharam-pahamehana ny lisitry ny kaonty kendreny sy ny fifandraisany ary tonga hatrany amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny sehatra fitakiana fizakan-tena Metadata, izay rehetra tsy miankina amin'ny adiresy IP mifandraika.
Mametraha Demo an'ny Metadata.io
Tags: abmbomboraCRMmpihaino facebookfirmografikafiantsonana pejytaratrafmLinkedInmpijery mijerymarketometadata.iofantsonasalesforcesalesforce crm